GTA V: yakavhurwa sosi yakazvimiririra kutyaira inosvika | Linux Vakapindwa muropa
GTA V: yakavhurwa sosi yakazvimiririra kutyaira iri pano
Kutyaira kwakazvimirira haizi nyaya yemota chaidzo, inosvikawo munyika yemitambo yemavhidhiyo, uye inozviitira zvese zvakanaka. Ndiyo chaiyo yakabudirira GTA nhepfenyuro kubva kuRockStar Mitambo iyo yakaigamuchira. Kunyanya, zvave zvakadaro zita rekuti GTA V, iyo yaunogona kushandisa yakazvimirira kutyaira mune ako mota.
Zvese zvinhu zvave zvekutenda kune mudiki programmer uyo akwanisa kushandisa webcam webasa uye chirongwa che open sosi OpenPilot kuita kutyaira kwakazvimiririra kuve kwechokwadi. Mugadziri ari mubvunzo anonzi Leon Hillmann, uye afunga kuita chimwe chinhu chinonakidza kwazvo: shandisa migwagwa yeGTA V senzvimbo yekuyedza kuyedza yakazvimiririra yekutyaira system.
Nenzira iyoyo, haifanirwe kuyedzwa mumigwagwa chaiyo. Uye chokwadi ndechekuti chinoshanda… (uye haisi nguva yekutanga kuti mutambo weRockStar ushandiswe pane izvi). GTA V ine mamwe mepu e migwagwa uye traffic ine ruzivo rwakakwana uye kwechokwadi, saka inzvimbo yakanaka kuyedza aya marudzi eanotenderera ekufambisa masystem uye kutevedzera maitiro.
Sekureva kwemutambi mukuru, Leon Hillmann, akafunga kuita bvunzo iyi achishandisa mutyairi akavhurika. Kuva yakavhurwa sosi, chero munhu anogona kuishandura uye kuigadzirisa kune, semuenzaniso, uyu mutambo wevhidhiyo. Asi rave risiri basa riri nyore. Uye zvakare, sekutaura, vanoda zvikwata zviviri. Mune imwe yadzo iwe waisa GTA V uye madhiraivha e Xbox controller yaunoshandisa. Mune imwe anoshandisa Ubuntu neOpenpilot yakaiswa uye webcam.
Nenzira iyi, iyo webcam kamera inorekodha zvinoonekwa munzira chaiyo yeGTA V, ndiko kuti, ndiyo "Muchina wekuona sensor" iyo inopa simba Openpilot, uye inogadzirisa ruzivo rwakagamuchirwa munguva chaiyo kudzora mota yeGTA V. Inogona kumhanyisa, kumedura, kutendeuka, ... Kutaurirana kwanga kusiri nyore, nekuti ndicho chinhu chakaomesesa kuita. Izvo zvave zvisiri nyore kuti Openpilot ive nehukama kutaurirana nemutambo mota.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GTA V: yakavhurwa sosi yakazvimiririra kutyaira iri pano